Vaovao - fomba 4 hikirakirana ny mety hisian'ny data sy hampiasana azy hanatsarana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fiarahamonina
Raha vao niditra tao amin'ny serivisy afo i Bill Gardner tany Texas ambanivohitra tamin'izany, dia tonga izy naniry ny hitondra fiovana tsara. Androany, amin'ny maha lehiben'ny mpamono afo miasa an-tsitrapo azy, mpamono afo an-tsitrapo ary talen'ny vokatra mpamokatra afo ho an'ny ESO, dia hitany ihany koa ireo hetahetany amin'ny taranaka ankehitriny sy ho avy. Ho fanampin'ny antso hanompo, dia ilain'izy ireo ny mahatakatra ny fiantraikan'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny iraka sy tanjon'ny departemanta misy azy ireo. Tian'izy ireo ho fantatra ny vokatr'izy ireo, tsy amin'ny alàlan'ny fanatanterahana manokana sy ny tantara mahery fo fotsiny, fa miaraka amina angona mangatsiaka sy mafy.
Ny fanarahana ny angona momba ny tranga toy ny doro ao an-dakozia dia afaka manampy amin'ny fametrahana laharam-pahamehana ho an'ny fanabeazam-pirenena. (Image / Getty)
Sampan-draharaha maro no manangona vaovao momba ny trangana afo sy ny valiny, ny mpamono afo sy ny maty an-trano ary ny fatiantoka fananana hotaterina amin'i Rafitra fanaovana tatitra momba ny trangam-pirenena. Ity fampahalalana ity dia afaka manampy azy ireo hanara-maso sy hitantana ny fitaovana, handraketana ny asa aman-draharaha isan-karazany ary hanamarina ny teti-bola. Saingy amin'ny fanangonana angon-drakitra mihoatra ny fenitry ny NFIRS, ireo masoivoho dia afaka miditra amin'ny loharanom-pahalalana amin'ny fotoana tena izy mba hampahafantarana ny fanapahan-kevitra ary hanampy amin'ny fiarovana ny mpamono afo, ny mponina ary ny fananana.
Araka ny a Fanadihadiana momba ny angona nasionaly 2017, angon-drakitra "fitomboana dia nitombo mihoatra ny angona fisehoan-javatra ary ilaina ny fomba feno hampifandraisana ny angona rehetra momba ny afo mba hiantohana fa miasa miaraka amin'ireo angon-drakitra ireo sampana mpamono afo izay tena mitana ny sary feno amin'ny hetsika ataon'izy ireo."
Mino i Gardner fa ny angona nangonin'ny EMS sy ny sampan-draharaha mpamono afo dia manana lanja manan-danja izay mbola mikatona amin'ny ankapobeny.
"Heveriko nandritra ny taona maro, nanana fampahalalana izahay ary fahatsapana ny faharatsiana ilaina izay ilain'ny olon-kafa izany fampahalalana izany, na ilaina mba hanaovana karazana fanamarinana ny fisiantsika," hoy izy. “Saingy tena ilaina izany, mba hitarihana izay tokony hataontsika sy hitarihana ny toerana tokony halehantsika amin'ny masoivoho tsirairay.”
Ireto misy fomba efatra ahafahan'ny maso sy ny maso misahana ny EMS mametraka ny angon-drakitra ampiasainy:
Ny risika dia sokajy lehibe ary raha te hahalala ny tena loza ateraky ny fiarahamonina dia mila manangona angona izay manampy azy ireo hamaly fanontaniana toy ny:
Firy ny firafitra ao amin'ny faritra iray na vondrom-piarahamonina iray?
Inona no fanaovana ilay trano?
Iza ireo olona mipetraka ao?
Inona avy ireo fitaovana mampidi-doza voatahiry ao?
Inona ny famatsian-drano an'io trano io?
Inona ny fotoana famaliana?
Oviana no nojerena farany ary ahitsy ny fandikan-dalàna?
Firy taona ireo firafitra ireo?
Firy no manana rafitra famonoana afo?
Ny fananana an'ity karazana data ity dia manampy ny departemanta hanombatombana izay loza mety hitranga amin'izay ahafahan'izy ireo mizara loharanon-karena mifanaraka amin'izany ary manao ny laharam-pahamehana ny paikady fanalefahana, ao anatin'izany ny fanabeazana eo amin'ny fiaraha-monina.
Ohatra, ny angon-drakitra dia mety hampiseho fa amin'ny tatitra momba ny afo firafitra 100 ao anatin'ny herintaona, ny 20 amin'izy ireo dia may avokoa - ary amin'izany 20, 12 izany dia afo ao an-trano. Amin'ny afo ao an-trano, valo no manomboka ao an-dakozia. Ny fananana izany angona granular izany dia manampy ny departemanta aotra amin'ny fisorohana ny hain-trano any an-dakozia, izay mety ho ny ankamaroan'ny fatiantoka afo ao amin'ny fiarahamonina.
Izany dia hanampy amin'ny fanamarinana ny fandaniana amin'ny simulator mpamono afo hampiasaina amin'ny fanabeazana ho an'ny fiarahamonina ary ny tena zava-dehibe, ny fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina dia hampihena be ny mety ho doro lakozia.
"Raha mampianatra ny vondrom-piarahamonina ianao amin'ny fomba sy amin'ny fotoana tokony hampiasana fitaovana famonoana afo," hoy i Gardner, "dia hanova tanteraka ny risika sy ny vola mifandraika amin'izany eo amin'ny fiaraha-monina misy anao izany."
2. NY FAMPANDROSOANA NY SAFITY FIREFIGHTER
Ny fanangonana angon-drakitra momba ny haintrano dia tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fiarovana ny mpamono afo amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ireo mpiasa an-tsambo raha misy fitaovana mampidi-doza voatahiry eo an-toerana, afaka manampy ny mpamono afo ihany koa ny fahatongavan'izy ireo amin'ny carcinogens.
"Isan'andro, ny mpamono afo dia mamaly ny afo izay manome akora fantatsika fa voan'ny kanseran'ny homamiadana. Fantatray ihany koa fa ny mpamono afo dia manana isan-jato betsaka amin'ny karazana homamiadana sasany noho ny isan'ny mponina amin'ny ankapobeny, ”hoy i Gardner. "Ny data dia nanampy anay hifanaraka amin'ny fiakaran'ny tahan'ny homamiadana amin'ny fihanaky ireo vokatra ireo."
Ny fanangonana izany data izany ho an'ny mpamono afo rehetra dia zava-dehibe mba hahazoana antoka fa ny mpamono afo dia manana fitaovana ilain'izy ireo mba hampihenana ny famoahana sy handotoana azy ireo tsy misy ahiahy, ary koa hamahana izay filan'ny fitsaboana amin'ny ho avy mifandraika amin'izany.
3. Hihaona amin'ny filàn'ny CONSTITUEN'izy ireo
Ny vonjy taitra diabeta dia antony mahazatra iantsoan'ny EMS. Ho an'ireo masoivoho miaraka amina programa paramedicine eo amin'ny fiaraha-monina, ny fitsidihana marary mararin'ny diabeta dia afaka manome tombony mihoatra ny famahana ny krizy diabeta eo noho eo. Ataovy azo antoka fa manana sakafo ny marary na mifandray amin'ny loharano toy ny Sakafo amin'ny kodiarana - ary manana ny fanafodin'izy ireo izy ireo ary mahay mampiasa azy ireo - dia ny fotoana sy ny vola lany lany.
Ny fanampiana ny marary hitantana ny diabeta dia mety hisoroka ny fitsangatsanganana marobe any amin'ny efitrano fitsaboana ary hanampy ny marary hisoroka ny filan'ny dialyse ary ny vidiny ary ny fiantraikan'ny fomba fiainana mifandraika amin'izany.
"Manoratra izahay fa nandany roa arivo dolara tamin'ny programa paramedika fahasalamana ho an'ny fiarahamonina ary nahavonjy arivony tapitrisa dolara tamin'ny fitsaboana ara-pahasalamana," hoy i Gardner. “Fa ny tena zava-dehibe, azontsika atao ny mampiseho fa nisy fiantraikany tamin'ny fiainan'ny olona iray sy ny fiainan'ny fianakaviany. Zava-dehibe ny fampisehoana fa nanisy fiovana isika. ”
4. Milaza ny tantaran'ny AGENCY anao
Ny fanangonana sy famakafakana ny angon-drakitra EMS sy ny sampana mpamono afo dia ahafahanao manao tatitra mora kokoa amin'ny NFIRS, manamarina ny fandaniana na mizara loharanon-karena, ary manakiana ihany koa ny milaza ny tantaran'ny maso ivoho. Ny fanehoana ny fiantraikan'ny maso ivoho amin'ny fiarahamonina, na amin'ny tanjona ivelany toy ny famatsiam-bola sy ny fizarana teti-bola, ary ny fampisehoana ireo mpamono afo anatiny fa manao fiovana lehibe eo amin'ny fiarahamonina izy ireo no hampiakatra ny masoivoho amin'ny sehatra manaraka.
"Mila afaka mandray izany angona izany izahay ary miteny hoe eto ny isan'ny antso azontsika, fa ny tena zava-dehibe, dia izao ny isan'ny olona tamin'ireny tranga ireny izay nanampy anay," hoy i Gardner. "Ity ny isan'ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamoninay izay, tamin'ny fotoana mora azony indrindra, dia teo izahay mba nanisy fiovana ho azy ireo ary afaka nitahiry azy ireo hatrany amin'ny fiarahamonina."
Araka ny fitaovana fanangonana data mivoatra amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fahitainganana ary ny taranaka vaovao dia miditra amin'ny serivisy afo izay efa mahatakatra ny fahazoana miditra amin'ny angon-drakitra, ny sampana mpamono afo izay mampiasa ny herin'ny angon-drakitra manokana dia samy manana ny fomba fiheviny ilainy handray fanapahan-kevitra tsara kokoa sy ny fahafaham-po amin'ny fahalalana ny fiantraikany efa nataon'izy ireo.